Filtrer les éléments par date : dimanche, 27 septembre 2020
dimanche, 27 septembre 2020 19:59
Ny fanajana lera dia fanajanao ny tenanao
Pilo kely: Ny fanajana lera dia fanajanao ny tenanao sy ny teny nataonao, ary fanajanao izay nomenao na nekenao fotoana.
Ka ny filazana fa ny manao zavatra tsy mora, ny fotoam-bita tsy mahaleo ny sampona, sy ny miala tsiny amin'ny fahatarana izany dia efa fambara tsy fahaizana mandamina fotoana, sy mametraka programa. Tsy nisy nanery anao amaritra fotoana, fa rehefa nofaritana dia tokony nahay naka fepetra mifanaraka amin'izany.
dimanche, 27 septembre 2020 19:48
Ambalavao Tsienimparihy: Miaina delestazy manomboka anio
Namoaka fanambarana ny JIRAMA fa ifandimbiasana ny fahazoana herinaratra ao Ambalavao manomboka anio noho ny faharitan’ny rano manodina ny milina mpihary herinaratra ao Ambodikimba Ranomafana.
dimanche, 27 septembre 2020 19:31
FITEFA: Nanampy ireo mpianatra zanak’Antsiranana may trano teny Ankatso
Nitondra fampitaovana sy lelavola ho fanampiana ireo mpianatry ny oniversite may trano tao amin’ny Bloc Amicale II teny Ankatso ny FITEFA (Fikambanan’ny Teraky ny Faritany Antsiranana) tarihin’i Bekasy Jonhfrince.
Miisa 25 ireo mpianatra zanaky ny Faritany Antsiranana, traboina noho io haintrano io.
dimanche, 27 septembre 2020 19:25
Fifamoivoizana: Maro ireo fiara tsy ara-dalàna na lany paikandro mivezivezy eny amin’ny arabe
Nanatanteraka hetsika fisavana ireo fiara mitondra ny laharana "WW", sy ireo fiara mitondra laharana vahiny, ary ireo fiara efa mitondra laharana gasy ny Foibe fitsarana fiarakodia, niaraka tamin’ny Polisim-pirenena ny 21 ka hatramin'ny 25 septambra 2020 teo.
Nahatratra 4 587 ny isan'ireo fiara voasava tamin'izany.
Araka ny tatitra nataon’ny Foibe fitsarana fiarakodia dia 1 121 no isan'ireo mitondra ny laharana WW, 985 ny isan'ireo mitondra laharana vahiny, ary 2 481 ny isan'ireo fiara mitondra laharana malagasy voasava nandritra io fotoana io.
Governora: Herintaona izao no nanendrena ireo andiany voalohany
Feno herinataona ny 25 septambra 2020 ny nanombohan’ny fanendrena an’ireo Governoran'ny Faritra. Niisa 11 izy ireo no voatendry tamin’ny andiany voalohany ny 25 septambra 2019.
Nanambara ny filoham-pirenena fa ho voatendry alohan'ny faran'ny taona 2019, ireo Governora ambiny.
Herintaona aty aoriana dia mbola misy Faritra efatra, Amoron’i Mania, Betsiboka, Ihorombe ary Melaky tsy mbola manana Governora.
Lehilahy avokoa ireo Governoran'ny Faritra miisa 18 voatendry sy amperin’asa hatreto.
dimanche, 27 septembre 2020 19:09
Morafeno – Antsiranana: Vehivavy maty nianjeran’ny andrinjiron’ny Jirama
Vehivavy iray, 36 taona, mpivarotra dalaly katakata (mpivarotra akondro mandehandeha) no maty tsy tra-drano nianjeran'ny andrinjiron’ny Jirama teo Morafeno omaly.
Efa tsy nisy tariby ilay andrinjiro hazo izay efa lo, no izao nianjera tampoka ka namono olona izao.
Tsy ho afaka handray anjara amin’ny lalao ara-pirahalahiana hihaonan’ny Barea sy Luxembourg, i Anicet Abel, kapitenin’ny Barea. Naratra nandritra ny fanazaran-tena nataony tao amin'ny klioba izay ilalaovany ity farany.
Maharitra eo amin'ny telo herinandro eo ho eo ny fitsaharana tsy ahafahany miakatra eny ambony kianja.
Tsy ho eo i Anicet Abel amin'ny fampivondronana izay hatao ao Frantsa amin'ny voalohandohan'ny volana oktobra io. Ho tafaraka amin'i Barea kosa izy amin'ny fihaonana amin'ny Côte d'Ivoire.
Noho ny fahatahorana an'ilay Covid-19 no voalaza fa nahatonga ny safidy hanatanterahana ilay fampivondronana any Luxembourg. Sady mahay mandray olona ihany koa, no mampihena ny vola mivoaka avy amin'ny fanjakana Malagasy.
dimanche, 27 septembre 2020 18:57
67ha: Mpanendaka mitam-piadiana lavon'ny balan'ny Polisy
Nanendaka lehilahy saika hanatitra, avy eo nanendaka vehivavy andeha hivavaka indray, ka lasa ihany koa ny vola sy ny Baiboly. Telo lahy nitondra sabatra no nanendaka tsy nahalala andro alahady tetsy 67ha.
Tsikaritry ny Polisy nanao fanamiana ny asa ratsy nataon’izy ireo. Niditra an-tsehatra avy hatrany io nanenjika azy ireo vantany vao nahita ilay sabatra sy ilay vehivavy voaendaka.
Saika hampiasa ireo fitaovana teny aminy moa ireto olon-dratsy ka voatery nampiasa hery ny Polisy, ary voan'ny bala teo amin'ny takibany ny mpanendaka iray. Noho ny ratra nahazo ity mpanendaka iray voatifitra ity dia tsy tana intsony ny ainy.
Tafaporitsaka ireo mpanendaka roa hafa namany, ary mbola mitady azy ireo ny Polisy amin'izao fotoana izao.
dimanche, 27 septembre 2020 08:46
27 septembre: Journée Mondiale du migrant et du réfugié.
dimanche, 27 septembre 2020 08:44
27 septembre: Journée mondiale du tourisme.